Belarosia: Mampiakatra Ny Tahan’ny Fandraisana Anjara ny Antso ho Fanaovana Ankivy Ny Fifidianana Ireo Fifidianana Mialohan’ny Fotoana · Global Voices teny Malagasy
Belarosia: Mampiakatra Ny Tahan'ny Fandraisana Anjara ny Antso ho Fanaovana Ankivy Ny Fifidianana Ireo Fifidianana Mialohan'ny Fotoana
Voadika ny 31 Desambra 2018 19:56 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 22 Septambra 2012)
Mihoatra ny 39.000 ireo mpampiasa niditra tao amin'ny vondrona VKontakte Stop Luka [Belarosiana] , izay mandrisika ireo mpifidy mba hanao ankivy ny fifidianana parlemantera any Belarosia amin'ny 23 Septambra (ilay ”tsy-fifidianana”, araka ny iantsoan‘ny blaogy Eastern Approaches an'ny The Economist’ azy):
[…] Rehefa tonga ao amin'ny birao fifidianana isika, manisy ny soniantsika ary ”mifidy.” Ny hany zavatra manan-danja eto dia ny fandraisana anjara, izay mampifanaraka amin'ny lalàna ny fitondram-panjakana, ary ny fiheverantsika fa manao ”karazana safidy isika.” […]
Tsy misy dikany ny hifidianana – ho angalarina ny safidinao. Tsy misy olona ho fidiana – ireo mpitana birao mpomba ny fitondrana sy ireo mpisolo ireo sampandraharaha manokana no mifaninana ao amin'izany. Tsy misy dikany ny handehana any amin'ny birao fifidianana ary ny handraisana anjara amin'ny fanaovana hosoka. Ny ankivy ihany. Ny fandàvana tsy hiaraka miasa amin'ny fitondram-panjakana irery ihany. […]
Mora ny mangalatra ny safidy, fa tsy azo atao ny manao hosoka ny fandraisana anjara. Raha toa ka tsy tona any amin'ny birao fifianana ireo Belarosiana, ho hita amin'ny voamaso roa izany. Ary hidika izany fa manohitra ilay mpanao jadona ny vahoaka. […]
Raha toa ka manao ankivy ny fifidianana ianao, manampy ny firenenao handroso mankany amin'ny fahafahana ianao. […] Ianao ihany no misafidy na hilalao ny lalaon'ny mpanao jadona na handà tsy hanampy ny [Filoha Aleksandr Lukashenko]. […]
Sora-baventy miantso ny fanaovana ankivy ny ”fifidianana” amin'ny 23 Septambra any Belarosia, izay navoaka tao amin'ny vondrom-piarahamonina “Stop Luka” tao amin'ny VKontakte.
Na izany aza, hita fa toa tsy hisy olana ny fandraisana anjara.
Nanoratra tao amin'ny Facebook ny Mpanao Gazety, Pavel Sheremet [Rosiana] tamin'ny Alakamisy 20 Septambra fa 3 isan-jaton'ireo mpifidy no nandrotsaka ny vatony tamin'ny andro voalohany tamin'ny fifidianana.
Nasongadin'i Aleh Pov [Rosiana] tao anatina fanehoankevitra iray ho valiny ho an'i Sheremet fa 7 isan-jato sahady ny fandraisana anjara tamin'ny andro faharoa:
[…] Raha mitohy izao, hahatratra 25 isan-jatony isika mandra-pahatongan'ny 22 Septambra.
Namoaka ity fanehoankevitra ity [Belarosiana] i Irena Ławrowska :
Vao tonga avy tany amin'ny mpanao volo mihitsy… [Nampianatra ireo vehivavy] – ary inona no eritreretinao? Tsy handeha [hifidy] ny ankamaroan'izy ireo. Ahitana […] mpisotro ronono amin'ireo handeha [any amin'ny biraom-pifidianana], satria tsy nanadino ny nifidy mihitsy izy ireo, [ireo tsy dia niraharaha], satria ”niteny azy ireo ny hanao izany ny lehibeny”, ary mazava ho azy, ireo tena ”mavo volo” tanteraka!
Tamin'ny Zoma, nitatitra [Rosiana] tao amin'ny Facebook ny BelarusPartisan fa 12,5 isan-jaton'ireo vato no efa narotsaka tao anatin'izay telo andro nifidianana izay.
Fanasana amin'ny fifidianana parlemantera any Belarosia: ”23 Septambra 2012 – Fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny Tranon'ny Mpisolotena ny Antenimieram-pirenen'ny Repoblikan'i Belarosia – Ndeha hifidy avokoa ny tsirairay!” (Sary ho an'ny sehatra ho an'ny daholobe.)
Tao anatin'ny lahatsoratra Facebook iray hafa, nizara [Rosiana] sarin'ny BelarusPartisan ahitana vondrona miaramila milahatra ho an'ny fifidianana nokarakaraina mialoha tao Machulishchi [Rosiana],tanàna iray eo akaikin'i Minsk izay mampiantrano toby miaramila i Sheremet. Ireo ambany ireo ny sasany tamin'ireo fanehoankevitr'ireo mpamaky:
Mety hitsahatra ny faharetan'ireo Belarosiana.
Mihevitra aho fa hipoaka i Belarosia na ho ela na ho haingana. Tsy afaka ny hitohy mandrakizay izao.
Afaka [ny hitohy mandrakizay] izao.